Unoita Kuti Vanhu Vagare MuWiricheya Yako Here? Kurega Mumwe Munhu Agare
Ndeipi pfungwa yakajairika kana zvasvika pakubvumidza vanhu kuti vagare pachigaro chako pachako? Ini handisi wiricheya mushandisi pachangu, asi ini ndinogona kuunganidza kuti a wiricheya inogona kuve chidimbu chaicho chemidziyo, uye panogara paine njodzi yekuti munhu ari kuyedza chigaro kunze anogona kukuvadza furemu kana izvo zvinhu.
Iyo inowanzozivikanwa peturu peeve mune ino kesi kubva pane zvandakaverenga kubva kune vashandisi ndeyekuti ivo vanotsamwa kana mutorwa akagara pachigaro chavo asina kubvunza. Zvinonzwisisika, chigaro chako chaunoshandisa kutenderera uye zviri pachena mumaoko ako, nei mutorwa achibvunza pakutanga? (kupindura wangu wega mubvunzo, pamwe kuda kuziva.)
wiricheya vashandisi vanoita kunge vasina hanya zvakanyanya kana nhengo yemhuri ikagara pachigaro chavo (kunyangwe vasina kubvunza) nekuda kwechikonzero chiri pachena chekuti ivo vemhuri. Kunyangwe neruzivo urwu mupfungwa, wiricheya vashandisi vane mukana mukuru wekurega kurega mwana achishandisa chigaro chavo nekuda kwemukana wepamusoro wekuti vangatyora chimwe chinhu.
Kana mwana wako akapedzisira agara mune mumwe munhu wiricheya, iwe unofanirwa kuziva chokwadi chekuti chinonyanya kunge chiri chinhu chinodhura kwazvo, uye kuti pane mukana wekuti mwana angatyora chimwe chinhu.
Shangu Kuenzaniswa ne Mawiricheya: Kwete
Vamwe vanhu vaita muenzaniso wekuenzanisa yako wiricheya kubhutsu dzako, izvi zvine musoro neimwe nzira nekuti zvese zviri zviviri nzira dzekutenderera mumba kana kunze. Asi kune rimwe divi, kwete, Mawiricheya hazvina kufanana neshangu kazhinji. Sei? Nekuti Mawiricheya inowanzo kuve iyo ROTI yakaoma kuwana muhukuru hwakakodzera uye ivo vari pricy zvakare.
Kana iwe uine mumwe munhu akapfeka shangu dzako uye akadziparadza neimwe nzira, iwe ungangodaro ungangodaro waigona kuwana yekutsiva shangu mukati memazuva mashoma zvakanyanya. Uine wiricheya mushandisi, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti macheya mazhinji anogona kunge ari muma100 yemadhora renji, uye kutora mavhiki, pamwe mwedzi kuti upinde mumamiriro ezvinhu ane rombo rakanaka.
Ndezvipi Vamwe Vashandisi Vanofunga?
Kune boka diki re wiricheya vashandisi vanogona kuve vanonetsekana nenyaya yekukutendera kuti ugare pachigaro chavo. Izvi zvinogona kuve nekuti vanozvikoshesa zvakanyanya, kana nekuti vane kuzvidza vanhu vanogona kufamba uye kusarudza kugara mu wiricheya kwechinguva. Ehe, izvi zvinonzwika kunge zvinonzwika kubva kumunyori wenyaya ino, asi ndiri kuvakira izvi pakuverenga wiricheya mushandisi akataura zvine chekuita nenyaya iyi chaiyo.
Saka haisi yangu maonero, asi mafungiro evamwe vashandisi kunze uko.
Mukupedzisa, kunyangwe iwe uri hama kune wiricheya mushandisi, iwe unofanirwa kugara uchibvunza usati wagara pachigaro chavo pasi pechero mamiriro ezvinhu.
Hakusi chete kusaremekedza kusabvunza mune dzimwe nguva, asi kune vamwe iwe unogona kuve nemhosva yechinhu chero chipi zvacho chinoitika iwe ugere pasi.